मकै लगाउने मौसममा बीउको अभाव - नेपालबहस
मकै लगाउने मौसममा बीउको अभाव
९ फागुण २०७७ | १५:१०:३४ मा प्रकाशित
९ फागुन,चितवन । चितवनमा मकै लगाउने मौसममा बीउको अभाव भएको छ । हरियो घोगा र कुखुराको दानाका लागि उत्पादनको समयमै मकै बिक्री भएपछि बीउ अभाव भएको हो ।
कृषि ज्ञान केन्द्र भरतपुरका योजना अधिकृत उमराज अर्यालका अनुसार बीउका लागि उत्पादन गरिने मकैका उत्पादन गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया कृषकले झन्झटिलो मान्न थालेकाले बीउको अभाव भएको हो । उनका अनुसार जिल्लामा बीउको मागको ५० प्रतिशत पनि उपलब्ध छैन । जिल्लामा १३ हजार ३०० हेक्टर क्षेत्रफलमा वसन्ते ९वर्षे० मकै लगाइँदै आएको छ । सोका लागि ३६६ टन बीउ आवश्यक पर्छ ।
जिल्लामा पाँच हजार हेक्टरमा हिउँदे मकै लगाइन्छ । उन्नत जातको बीउ उत्पादन गर्नका लागि ३०० मिटर वरिपरि अर्को जातको मकै लगाउन मिल्दैन । परागसेचनका कारण वरिपरि एउटै जातको मकै हुनुपर्ने अर्याल बताउछन् । बीउ मकै लगाउने जमीनको वरपरका किसान मिलेर मात्रै लगाउनुपर्ने समस्याका कारण पनि किसानले झन्झट मान्ने गरेको उनको भनाइ छ । बीउका लागि उत्पादन गर्न झन्झटिलो हुने भए पनि तत्काल बिक्री गर्न सहज हुने गरेको छ । कृषकले कुखुराको दानाका लागि तत्कालै बिक्री गर्दा राम्रो मूल्य पाउने गरेका छन् ।
यस्तै घोगा बिक्री गर्दा समेत राम्रो आम्दानी हुने भएपछि ६ महिनासम्म बीउका लागि भण्डारण गर्न छाडिएको अर्याल बताउछन् । जिल्लामा हिउँदे मकै पाँच हजार हेक्टरमा २१ हजार मेट्रिक टन र वसन्ते मकै १३ हजार ३०० हेक्टरमा ५१ हजार १०० मेट्रिक टन उत्पादन हुने गरेको छ ।
अर्यालका अनुसार अहिले किसान उन्नत जातको बीउ नपाएपछि वर्णशङ्कर मकै लगाउने तयारीमा लागेका छन् । जिल्लामा विशेष गरी स्थानीय जातका मकै, रामपुर कम्पोजिट, अरुण– २, रामपुर हाइब्रिड –१० जातका मकैको बीउ प्रयोग हुँदै आएका छन् । अहिले जिल्लामा नै उत्पादित उन्नत जातको मकैको मूल बीउ पाउन नसक्दा किसान चिन्तित बनेका हुन् । उन्नत जातको बीउका लागि किसानले चर्को मूल्य तिर्दासमेत पाउन नसकेको गुनासो आउन थालेको उनले बताए ।
भोकमरी संकट व्यहोरेको जाजरकोट मकै निर्यात गर्नुपर्ने अवस्थामा कसरी पुग्यो ? २ महिना पहिले
घरमा सुरक्षित राखिएको मकैको सुली ३ महिना पहिले
दाङमा माहुरीपालक कृषकको सङ्ख्यामा वृद्धि ३ महिना पहिले
जङ्गली जनावरका कारण खाद्यबाली उत्पादनमा कमी ३ महिना पहिले
दाङमा मकै उत्पादनमा वृद्धि, किसान खुशी ४ महिना पहिले
देशभर फौजीकीराले मकै बालीमा ठूलो क्षति, नियन्त्रणका लागि अनुसन्धान शुरू ५ महिना पहिले
खपतमा कमी आएपछि घट्यो चिज उत्पादन १७ घण्टा पहिले
पार्टीको आधिकारिक धारणा नेताहरूबाट बुझ्‍न श्रेष्ठकाे आग्रह १६ घण्टा पहिले
दक्षिणकालीमा टिपरको ठक्करबाट पैदलयात्रीको मृत्यु १८ घण्टा पहिले
सहज रुपमा नाका नखुल्दा चुलो बल्नै सकस १४ घण्टा पहिले
अष्ट्रेलियामा फेसबुक र गुगलले समाचारका लागि रकम तिर्नुपर्ने २ दिन पहिले
आम हड्तालकाे असर स्थानिय बजारमा ३ हप्ता पहिले
कामना सेवा बैंकको ऋणपत्रमा आवेदन दिने आज अन्तिम दिन १ हप्ता पहिले
कोरोना कहरकै विद्यालय सञ्चालन गरी पठनपाठन शुरु ५ महिना पहिले
मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा कोरोनाको असर छैन १२ महिना पहिले
२०७८ सालको एसईई रजिष्ट्रेसन फारम खुल्याे २ महिना पहिले
बढ्यो ओलीको छटपटी, गुटका नेताहरुको दौडधुप ! ८ महिना पहिले